हे भगवान, मोरङमा बनाइ सकेको चितामा लाश जल्न पाएन, मलामी किन त्यसै फर्किए ? सबैले हेर्नुहोला भिडियो – दैनिक नेपाल न्युज
मोरङ । गत आइतबार देखि बेपत्ता रहेका मिक्लाजुङ वडा न. ६ कालिदह निवासी अन्दाजी १७ बर्सिय अनिस कार्की को शब् बुधबारका दिन नुनसरी खोलामा निर्बस्त्र रुपमा भेटिएको थियो । उनको लास हेर्दा संकास्पद देखिएता पनि खोलाले बगाएको हुन सक्ने पुर्वानुमान गरियो । उनको पोस्टमार्टम गर्नका लागि मोरङको मंगलबारे स्थित अस्पतालमा राखियो तर पोस्टमार्टम गर्ने बेलामा डाक्टरबाट यहाँ हुन नसक्ने जानकारी आएपछि त्यहाको माहोल तातिएको थियो ।
मृतक युवाको शरीरमा संकास्पद चोटपटक देखिएपछि स्थानीयले हत्या गरेर फालिएको आशंका गरेका छन् । घर बाट २ हजारको सामान पुराउनु छ भनेर निस्केका युवा भोलि पल्ट पनि नफर्के पछि उनकी श्रीमतीले उनका साथीलाई सोधेको बताइन । मृतकका साथीले काठमाडौँ गएको बताएपछि श्रीमती ढुक्कले बासिन तर बुधबार त्यो घटना सुन्दा उनको होस हवास उडेको उनको भनाइ छ । आखिर के हो सत्य तथ्य तल भिडियोमा मृतकको श्रीमती र आफन्तसंग गरिएको कुराकानी हेर्नुहोला ।